Wake wazibuza ukuthi kungani amadoda ashintsha? Ngokwemvelo, singaqonda izizathu zalesi senzo. Kodwa yini ekhuthaza abantu abangacabangi nje kuphela, kodwa futhi baqaphele ukuya ekupheleni? Kunoma yikuphi, ukuhlubuka kuyinkathazo enkulu, okuphela kokuphikisana nawo wonke amaqembu. Akubalulekile ukuthi umuntu ukhohlise noma ukhohlisiwe - wonke umuntu ulahlekelwa kulokhu.
Empeleni, ngenxa yokuvukela umbuso, azikho izizathu noma izimpikiswano ezinzima. Akekho oyoke aphendule umgqomo wethusi ethempelini futhi akukhohlise owesifazane wakho othandekayo ekuhluphekeni kokufa. Futhi uma kwenzeke kanye, cishe kuzokwenzeka futhi.
Izinhlobo ezimbili zokuhlubuka
Cishe wayengazi lokhu, kodwa abantu abaqamba amakhosikazi babo bahlukaniswe babe izinhlobo ezimbili: labo abazi ukuthi benza into engalungile, nalabo abaqiniseka ukuthi akukho okuziphatha okubi ngakho. Kodwa-ke, amadoda aqinisekile ukungalungi noma ihlazo lokungathengi, uzothola izinkulungwane zezizathu.
Yiqiniso, abesifazane nabo bashintsha abayeni babo. Ukuwakhohlisa kubangela ukuvuleka kocansi okuvela emphakathini wanamuhla. Ngokuhamba kwesikhathi, ukuthambekela ekubhekaneni nokungathembeki kwamadoda kuyothathwa. Nokho, namuhla "amaqhawe" ethu ngeke abe abesifazane. Ingabe ufuna ukwazi ukuthi kungani indoda yakho ikopela kuwe?
1. Ungumuntu omubi.
Phakathi kwabafana abalungile nabalungile kukhona okungenani kabili kokubi kakhulu. Futhi abesifazane, njengokubusa, badonsela ohlobo lwesibili. Lesi sigaba samadoda sisetshenziselwa ukusebenzisa abesifazane ngenhloso yabo siqu. Banolimi oluhle kakhulu, futhi bayakwazi ukuphuma emanzini. La madoda angakwazi ngisho nokugcwalisa izithembiso zabo, kodwa abanikezi kuphela. Umuntu omubi uzokwenza konke ukwenza umkakhe azizwe ekhethekile futhi efiselekayo, kodwa uzoshintsha abesifazane ohlangothini cishe masonto onke. La madoda angama-innate angabonakali. Abazange bashiye ubufakazi, kodwa unembeza wabo uhlale uhlanzekile. Kodwa-ke, uma ukukhohlisa sekuvule ngaphambi komkakhe, uzobe ehlushwa. Ngesikhathi esifanayo, umyeni wakhe uzizwa sengathi akukho okwenzekile.
2. Unquma ukushaya kuqala
Amanye amadoda azizwa evikelekile emshadweni. Mhlawumbe banobukhwele futhi bayabona ukuthi inqwaba yezinkanuko ezithandayo inakekela kanjani umfazi omuhle. Babesaba kakhulu ukumlahlekelwa, ukuthi banquma ukushaya kuqala. Ngisho noma umfazi angenasono. Leli qhinga lobuwula, kodwa lokhu kwenzeka kaningi. Ngakho-ke, umuntu uyaziphakamisa ngaphezu komkakhe futhi aqede ubuhlungu. Nokho, ekugcineni, umuntu uyadideka noma abe namahloni ngalokho akwenzile.
3. Akathokozi lokho anakho
Abantu abaningi abaze bacabange ukuthi isiphetho sabo sinikeze kangakanani. Bamthatha kalula umlingani wakhe. Ngokuvamile ukuhlukumezeka okungazi lutho kwenzeka ebusheni. Njengoba bengenaso isipiliyoni sempilo, abantu abakwazi ukuqonda ngokugcwele ukuthi banenhlanhla kangakanani. Baqala konke okukhuni, bakholelwa ukuthi ngemuva kwalolu cingo kocingo kukhona inqwaba yabesifazane abahle, abanomusa nabanakekelayo. Futhi emva kwesikhathi esithile kufika ukuqaphela ukuthi kungcono kunomfazi ukuthola muntu emhlabeni wonke.
Ukuphila komuntu kulula kakhulu kunokuphila komfazi. Uthola indawo engcono kakhulu yokusebenzela, ngaphandle kokucindezeleka, akabelethi futhi akakhulisi abantwana, akaqukethe ukulima. Ngesikhathi esifanayo, indoda inamandla nakakhulu emzimbeni, kodwa inamandla okuziphatha. Akalutho neze ukuzithiba, uma kuphazamisa abameleli besigamu esihle somuntu. Ngezinye izikhathi ukujikeleza kwegazi kusuka kusukela ekhanda kuya enhlanganweni ehluke ngokuphelele.
Akaqapheli ukuvuma ukuthi wayeka uthando
Ngezinye izikhathi imizwa ihamba futhi ingabe ivivinya isikhathi. Uthando luyinkimbinkimbi engokwemvelo yengqondo. Futhi uma imizwa yowesifazane oyedwa isilahlile, isuke ishintshwe ngomunye umuntu.
Amalungu ongenagama "Ural amadombolo"
Isitoreji izimonyo. Kanjani hhayi ukukwenza
Abazingela izilwane. Ubizo, wokuzilibazisa noma emsebenzini?